Ebola oo hal isbuuc 100 qof ku dilay deegaan yar - BBC News Somali
12 Disembar 2014
Image caption Ebola ayaa noqday cudur si fudud ku faafa dilaana ah
Hay’ada caafimaadka aduunka ee WHO ayaa ka digtay xaaladda degmada Kono oo 100 qof ay ugu dhinteen cudurka Ebola muddo 11cisho ah, taas oo ay walaac badan ka muujiyeen shaqaalaha xarumaha caafimaadka ee maxaliga ah oo aanan waxbadan ka qabin Karin arrintaasi.
Koox ka kooban dowladda Sierra Leone, hay’ada caafimaadka aduunka iyo xarunta xakameynta cudurada faafa ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay ogaadeen in xaalada halkaasi ay sii xumaaneyso, iyadoo in kabadan 16 deegaan oo ka tirsan degmadaasi uu saameeyay cudurka.
Agaasimaha ka hortaga iyo xakameynta cudurada ee dalkaasi, Dr Amara Jambai ayaa sheegay in hadda aanan wax badan laga ogeyn xaalada degmada kono.
Deegaankaas oo ah meesha laga qodo macdanta dheemanka ah ayaa la sheegayaa in hanaankeeda caafimaadka uu yahay mid aad u liita, waxaan halkaa ka shaqeeya hal aambalaas oo ku mashquulsan ka qaadida dadka bukaanka ah degmadaasi iyadoo ay wadooyinkana aad u xun yihiin.
Isla gaarigaas ambalaaska ah ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu qaado dhiigaga bukaanada si loogu soo baaro degmooyin kale.
Degmada ayaanan laheyn meel dadka lagu daweeyo ama qalab lagu ogaan karo qofka in uu qabo cudurka ebola iyo in kale.
Isbitaalka ugu weyn degmadaasi ayaa marmarka qaar waxaa loo isticmaalaa in la jiifiyo bukaanada qaba cudurkaasi.
Madaxa hoggaamiya dhaqameedka ee halkaasi oo sidoo kalana gudoominaya howlagalka looga soo horjeedo cudurka Ebola ayaa sheegay in qalab la’aantaasi jirta awgeed in bukaana badan ay ugu dhintaan guryaha cuduro kale ayaga oo ka cabsi qaba haddii ay tagaan isbitaalka in uu ku dhaco cudurka Ebola.
Madaxa ugu sareeya degmadaasi Paul Saquee ayaa sheegay in xaaladda ay aad u xumayd balse caawimaad ay ka heleen degmada dariska la ah ee Kenema oo u soo dirtay laba aambalaas.
Hay’ada bisha cas ayaa sidoo kale soo bandhigtay in bukaanada ay ka soo qaadi doonto degmadaasi oo ay geeyn doonto xarumaha daweynta ee Kenema.